Nkesa Anaconda: Ihe Kachasị Ezu maka Sayensị Sayensị na Python | Site na Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, Mmemme
Na ụbọchị ikpeazụ m na-amụ ma na-eme ihe miri emi nke Asụsụ mmemme Python nke anyị kwurula banyere blog ugboro ugboro, isi ihe kpatara ya bụ n'ihi na enwere m ọtụtụ echiche m chọrọ ịkọwapụta na ezubere ya machiini usoro na Linux mana nke ahụ nwere ike ịba ụba na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
Ọmụmụ ihe a niile enyela m ohere izute ọhụụ ngwaọrụ, usoro, na ntuziaka ga-aba ezigbo uru na ndị mmemme Python, ya mere na ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị nwere ike ịkekọrịta ọtụtụ isiokwu metụtara nnukwu asụsụ mmemme a.
Nkesa Anaconda bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị m weere kwesịrị ịbụ ihe ndabere maka usoro isiokwu a, ebe m na-atụle ya Suite zuru oke maka Science Science na Python na na ọ na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arụmọrụ nke ga-enyere anyị aka ịmepụta ngwa ngwa n'ụzọ dị irè karị, ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
3 Etu esi etinye Nkesa Anaconda?
Anaconda Ọ bụ Mepee Isi mmalitema ọ bụ nke ahụ gụnyere usoro nke ngwa, ọba akwụkwọ na echiche emepụtara maka mmepe nke Science Science na Eke Ọgba. Ke ofụri ofụri e ANaconda Nkesa bụ nkesa Python na-arụ ọrụ dị ka njikwa gburugburu ebe obibi, njikwa ngwugwu ma nwee nchịkọta ihe karịrị 720 emeghe isi nchịkọta.
Ejikọtara Anaconda Nkesa n'ime mpaghara 4 ma ọ bụ usoro teknụzụ, Onye nyocha Anaconda, Ọrụ Anaconda, ọba akwụkwọ sayensị data y Conda. A na-etinye ha niile na akpaghị aka na usoro dị mfe.
Mgbe anyị wụnye Anaconda anyị ga-enwe ngwaọrụ ndị a ahaziworị, anyị nwere ike ijikwa ya site na njirimara ọrụ njirimara Navigator ma ọ bụ na anyị nwere ike iji Conda maka nchịkwa site na njikwa. Can nwere ike iwunye, wepu ma ọ bụ melite ngwugwu Anaconda ọ bụla na ịpị aka ole na ole na Navigator ma ọ bụ jiri otu iwu sitere na Conda.
Ihe Suite a maka Sayensị Sayensị na Python nwere ọtụtụ atụmatụ, n'etiti nke anyị nwere ike ịkọwapụta ihe ndị a:
Free, emeghe iyi, na nnọọ zuru ezu akwụkwọ na a oké obodo.
Multiplatform (Linux, macOS na Windows).
Ọ na - enye gị ohere ịwụnye ma jikwaa nchịkọta, ịdabere na gburugburu maka sayensị data na Python n'ụzọ dị mfe.
Nyere aka mepụta ọrụ sayensị data site na iji IDE dị iche iche dịka Jupyter, JupyterLab, Spyder, na RStudio.
Ọ nwere ngwaọrụ dịka Dask, numpy, pandas na Numba iji nyochaa Data.
Ọ na-enye ohere iji anya nke uche hụ data na Bokeh, Datashader, Holoviews ma ọ bụ Matplotlib.
A dịgasị iche iche nke ngwa metụtara igwe mmụta na mmụta ụdị.
Anaconda Navigator bụ ezigbo ọrụ GUI nke njirimara njirimara mana enwere nnukwu ikike.
Nwere ike nweta ihe ngwugwu metụtara sayensị data na Python site na ọnụ.
Na-enye ike ịnweta akụrụngwa mmụta mmụta dị elu.
Wepụ nkwado ndabere na ngwungwu mbipute njikwa.
Ejiri ya akụrụngwa na-enye gị ohere ịmepụta ma kesaa akwụkwọ ndị nwere koodu nwere mkpokọta ndụ, nha, nkọwa na nkọwapụta.
Na-enye gị ohere ịchịkọta Python n’ime koodu igwe maka ime ngwa ngwa.
Ọ na-eme ka ederede ederede nke algọridim yiri nke ọma maka imezu ọrụ.
Ọ nwere nkwado maka arụmọrụ dị elu.
A na-ebugharị ọrụ na-enye gị ohere isoro ndị ọzọ kerịta ọrụ ma rụọ ọrụ na nyiwe dị iche iche.
Mee ngwa ngwa mejuputa mmejuputa oru oru sayensi.
Etu esi etinye Nkesa Anaconda?
Installwụnye nkesa Anaconda dị mfe, naanị gaa na Ngalaba Anaconda Nkesa nbudata ma budata ụdị nke ịchọrọ (Python 3.6 ma ọ bụ Python 2.7). Ozugbo ebudatara, anyị mepee ọnụ, gaa na ndekọ kwekọrọ wee mechaa nwụnye ya na nsụgharị kwekọrọ.
Dochie aha nke bash ebudatara
Mgbe ahụ, anyị ga-pịa enter na-aga n'ihu, anyị na-anabata ikike na yes, Anyị na-akwado ndekọ na ebe anyị ga-etinye Anaconda ma n'ikpeazụ anyị họrọ yes nke mere na Anaconda buru ụzọ karịa Python igwe.
Site na ọnụ anyị na-agba Anaconda Navigator na anaconda-navigator na anyị nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ ngwá ọrụ dị ka a hụrụ na gallery ndị na-esonụ.
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike iji ihe ndị a Conda iwu ndepụta nke ahụ ga - enyere gị aka ịwụnye ma jikwaa nchịkọta na ụzọ dị oke ọsọ.
Ezubere Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ maka Data Science na Python ma bara uru maka otutu ndị mmepe, nwere ọtụtụ ngwa na nchịkọta nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ nke ọma.
A ga-enyocha ọtụtụ ngwugwu na ngwa ọrụ dị na nkesa Anaconda n'ụzọ zuru ezu na isiokwu dị iche iche anyị ga-ebipụta, enwere m olileanya na mpaghara a nwere mmasị na gị ma echefula ịhapụ anyị na echiche gị na nkọwa banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nkesa Anaconda: Ihe Kachasị Ezu maka Sayensị Sayensị na Python
Na Windows ma ọ bụrụ Anaconda, mana na Linux ahụrụ m mgbe niile ka ọ dị mfe ịwụnye site na nkwụnye ego, ọ na-etinyekwu ya n'ime sistemụ, ọ dị mfe ịwụnye. Ma ọ dịkarịa ala maka iji pandas, numpy na Jupyter Notebook nke m nyere gị enweghị m nsogbu.
Zaghachi Jorge Álvarez
Ezigbo mma Lizard!
Zaghachi Edwin Enrique Vargas
Akwadoro ya maka anyị ndị na-amalite na eke?
Zaghachi Thaizir El Troudi
Akwadoro nke ukwuu maka ndị na-amalite na eke, enwere ngwaọrụ a na-akpọ akwụkwọ jippyyter nke arụnyere na Anaconda Distribution na nke m chere dị mma maka mmụta na ịdekọ ihe na Python… N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe edemede gbasara ngwa ọrụ a.
Aga m echere ya.
hello enweghị m ike ịgba ọsọ anaconda-navigator na ọnụ
Enwere m otu nsogbu ahụ.
ị kwesịrị ị na-etinye a mbụ naanị oge mbụ ha na-emeghe ya:
$ isi ~ / .bashrc
Na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ha mepee ya nkịtị dị ka ọ dị n'elu.
Zaghachi Fabio Gaviria
Ajụjụ, gịnị bụ ọwa telegram nke desdelinux ???
Nke a bụ ezigbo ajụjụ, ihe m na-achọ achọtaghị m ihe ọ bụla
Ugbu a anyị enweghị nsogbu njikwa, mana anyị na-atụle inwe ya ozugbo enwere ike. Maka obodo iji tinye ọnụ.
M arụnyere Anaconda3 na LinuxMint 18.2 M na-emeghe spyder ma chọpụta na ọ na-enye m ohere ịnweta draịvụ ike m. Don't hụghị USB. Kedụ ka m ga - esi hazie nhọrọ a? Ezi echiche
Zaghachi ka efueyo
Ngwa Ngwaọrụ dijo
Ezigbo nkuzi. M mepụtara igwe Lubuntu + Anaconda yana ihe niile ọ bụla ịga.
Ana m ekekọrịta ya ma ọ bụrụ na ọ bara uru: https://github.com/Virtual-Machines/Anaconda-VirtualBox
Zaghachi Virtual Machines